Vaovao - Nanao bina afo izahay ny marainan'ny 9 Oktobra 2020
Nanao vata fandoroana afo izahay ny marainan'ny 9 Oktobra 2020
Mba hanamafisana ny fahatsiarovan'ny mpiasa rehetra ny fiarovana ny afo, sy hanatsarana ny fahaizan'izy ireo amin'ny fisorohana ny afo sy ny fanamaivanana ny voina, mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana, dia nanao soa aman-tsara ny afo tamin'ny marainan'ny 9 Oktobra 2020, izay iray izahay volana alohan'ny andro fiarovana ny afo nasionaly. Maherin'ny 100 ny olona avy amin'ny sampana mpamokatra, ekipa miasa sy fiarovana azo antoka nanatrika ny fanabeazana afo.
Talohan'ny nanombohan'ny fandavahana dia nanao fanentanana ny mpitantana jeneralantsika Alex, nanazava ny lalàna mifehy ny fifaninanana sy ny teboka tokony hodinihina. Tamin'ny faran'ny fahavaratra sy tamin'ny fiandohan'ny fararano dia mbola avo dia avo ny mari-pana, ny fiarovana ny afon'ny orinasa no laharam-pahamehana amin'ny asa famokarana fiarovana. Amin'ny alalàn'ity fanazaran-tena ity, ny mpiasa rehetra dia nanatsara ny fahatsiarovan-tenany sy ny fahaizany miaro ny afo ho fanampiana ny tenany, izay mety hanana anjara toerana tsara amin'ny famokarana fiarovana sy ny fianakaviana azo antoka amin'ny ho avy. Nanazava lalina ny fampiasana fitaovam-piadiana afo ny mpitarika ny ekipan'ny fiarovana ary naneho ny tena ilaina. Ity teboka lehibe amin'ny famonoana afo ity dia nahatadidy antsika rehetra.
Taorian'ny fandavahana, ny talen'ny famokarana Atoa Li dia niantso ny mpiasa rehetra hianatra sy hahafehy ny fahalalana ny fiarovana ny afo ary hanatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana. Rehefa misy ny afo dia tokony hiatrika izany am-pitoniana isika ary hanao asa tsara amin'ny fisorohana ny fiarovana. Afaka mino isika fa ity fandavahana ity dia hanome traikefa mahomby sy asa vonjy maika amin'ny ho avy, ary hametraka fototra mafy orina amin'ny famokarana fiarovana isan'andro!